Maamulka Ashahaado la dirirka Faroole oo Buuga Tacsida Geerida Mellez Zanawi ka Furay Qunsuliyadda Itoobiya ee Garoowe (SAWIRO)
Written by Maamul on 22 August 2012. Maamulka Ashahaado la dirika ah ee Puntland ayaa Tacsi aan ayada oo kale Soomaaliya ka dhicin waxa ay u sameeyeey geeridii ku timid Cadowgii Koowaad ee Soomaaliya , Ficoonkii Afrika iyo Abrihii Cusbaa Meles Zanawi.
Faroole oo hogaaminayey xubnaha sar sare ee maamulkiisa ayaa maanta ku furey Qunsuliyada Ethiopia ee magaalada Garowe Buuga tacsida Shaydaankii Bakhtiyey Males Zenawii oo maalin ka hor ku geeriyoodey dalka Belgium. Faroole iyo maamulkiisa Ashahaado la dirika ah ayaa waxay tacsida u gudbiyeen ku simaha Qunsulka Ethiopia iyo saraakil kale oo Ethiopian ah oo ayagu ku sugnaa Xarunta Qunsuliyada.
Faroole oo hadalo kooban ka jeediyey xarunta Qunsiliyadda ayaa tilmaamey in Zenawi uu ahaa hogaamiye ka tagay Afrika guud ahaan iyo weliba Geeska Afrika oo si gaar ah Somaliyana saaxiib dhow u la ahaa asaga oo Faroole dhanka kalena sheegay in uu ka filayo kusimaha Raysal wasaaraha Hailemarian Desaglene inuu sii wado xiriirkii aya wanaagsanaa ee ka dhaxeeyey Ethiopia iyo Puntland.
Calanka Ethiopia ayaa laga taagay xarunta Qunsuliyada ,waxana buugani uu ka furnaan doona Qunsuliyada si looga tacsiyeeyo geerida raysal wasaarihii Ethiopia.
Maamulada Ashahaado la dirika ah ee Soomaaliya ka jira oo intooda badan uu sameeyey ayaa waxay farta wadnaha ugu hayaan sii jiritaankooda ka dib markii uu Bakhtiyey ninkii uu jiritaankoodu ku taagnaa waxayna cabsi ka qabaan in Mujaahidiinta Soomaaliya ay la wareegaan talada goobaha ay maamulkaan.
ICTISAAM waaye Ninkaan Gudoomiya Nugaal Comments (0)